Arabia Saodita Nanome 2 miliara dolara ny Banky foiben’i Yemen
Noho ny antso avo nataon’ny filoham-pirenena sy praiminisitra Yemenita ary ny fitotonganan’ny vola riyal any Yemen dia nandrotsaka vola mitentina 2 miliara dolara mahery ao amin’ny Banky foiben’i Yemen ny fanjakana Saodianina. Natao izao fanapahan-kevitra izao noho ny fanohizana ny fanohanan'ny fanjakana Saodianina ireo vahoaka Yemenita, hoy ny fanambarana ofisialy nivoaka tany Riyadh
The Cranberries Nodimandry i Dolores O’Riordan
Nodimandry omaly tany Londres , teo amin’ny faha 46 i Dolores O'Riordan, mpamoron-kira sady mpihira ao anatin’ilay tarika Irlandais The Cranberries, izay tena nanana ny lazany tokoa maneran-tany tamin’ny taona ’90.
Angovo nokleary Hiara-kiasa i Frantsa sy Sina
Nanao sonia fifanarahana i Frantsa sy Sina ny talata teo ny amin’ny fananganan’ny orinasa Areva foibe famokarana angovo nokleary ao Sina, nandritra ny fitsidihan’ny filoha Frantsay Emmanuel Macron tany Pekin. Mety hananosarotra ny orinasa Areva ny fananganana azy ity. Mety hahatratra 10 lavitrisa euro ny sarany.